Iindaba -Iba neqela elomeleleyo emva kokuthengisa, ukulungisa izixhobo ixesha elide kunye nokugcinwa kwilizwe liphela
Yiba neqela elomeleleyo emva kwentengiso, izixhobo zexesha elide ukulungisa ingxaki kunye nokugcina ilizwe liphela
[Isishwankathelo senkcazo] Hebei Xinguang Carton Machinery Manufacturing Co., Ltd.kumazantsi edolophu elikomkhulu iBeijing nakumantla eJinan. Inamanzi alula kunye nokuhamba komhlaba. Lishishini lobuchwephesha elinobungakanani obukhulu bemveliso yoomatshini bebhokisi kunye noomatshini bokushicilela. Inkampani inezixhobo zoomatshini abagqibeleleyo, inqanaba eliphezulu lobungcali, amava okufumana ubutyebi, ukomelela kobuchwephesha, iindlela eziphambili zokuvavanya, inkqubo yolawulo epheleleyo, kwaye ipasile i-ISO9001: 2000 isiqinisekiso senkqubo yolawulo lomgangatho wamanye amazwe (inombolo yobhaliso: 03605Q10355ROS), Ngaba inkwenkwezi ekhulayo kushishino lomatshini bokushicilela bebhokisi yelizwe lam. Iimveliso zenkampani yethu iimodeli ezininzi ngoomatshini, iinkcukacha ezipheleleyo, kwaye ukuhlangabezana
Hebei Xinguang Carton Machinery Manufacturing Co., Ltd.isezantsi kumazantsi elikomkhulu Beijing kunye emantla Jinan, kunye lula kakhulu amanzi kunye nokuthuthwa komhlaba. Lishishini lobuchwephesha elinobungakanani obukhulu bemveliso yoomatshini bebhokisi kunye noomatshini bokushicilela. Inkampani inezixhobo zoomatshini abagqibeleleyo, inqanaba eliphezulu lobungcali, amava okufumana ubutyebi, ukomelela kobuchwephesha, iindlela eziphambili zokuvavanya, inkqubo yolawulo epheleleyo, kwaye ipasile i-ISO9001: 2000 isiqinisekiso senkqubo yolawulo lomgangatho wamanye amazwe (inombolo yobhaliso: 03605Q10355ROS), Ngaba inkwenkwezi ekhulayo kushishino lomatshini bokushicilela bebhokisi yelizwe lam.
Iimveliso zethu zineemodeli ezininzi zoomatshini kunye neenkcukacha ezizeleyo, ezinokuhlangabezana neemfuno zabasebenzisi abahlukeneyo. Ngomoya we "Qhubeka Uphucula" kwaye "Ukukhokela phezulu", inkampani yethu ikhuthaza ukulawulwa komgangatho ophezulu. Iimveliso ezivelisiweyo, ngenxa yenkangeleko yazo entle, ubungcibi bokusebenza ngobuchule, ixabiso elifanelekileyo kunye nenkonzo yokuthengisa emva kokuthengisa, yamkelwe kakuhle ngabasebenzisi abavela kwihlabathi liphela iminyaka emininzi.
Inkampani ine-30 yeminyaka ye-R & D kunye namava okuvelisa. Inkampani ibambelele kwingcinga yenkonzo "esemgangathweni njengesiqinisekiso, inkonzo njongo, kunye nokujolisa kubathengi", kwaye ibandakanyeka kubuchwephesha obuphambili, ulwazi lobungcali kunye nolawulo lwekhompyuter. I-R & D kunye nokuveliswa kwezixhobo zemveliso yebhodi yonke. Ngokusekwe ngoku, sijonge kwikamva, sijamelene nemfuno engxamisekileyo yokutshintsha oomatshini bebhokisi abaphambili, siya kuthi sisebenzisane ngentshiseko epheleleyo, someleze ulawulo lwangaphakathi, sandise intengiso ngaphandle, sandise uphando lwezenzululwazi, uphando kunye nokuphuhlisa iintlobo zeemveliso ezintsha , kunye nokuphucula iimveliso ezikhoyo Isalathiso ngasinye senkampani sizama ukukunika uxolo lweengqondo ezili-100 kunye nolwaneliseko lwe-1 kunye neemveliso ezikumgangatho ophezulu kunye nexabiso eliphantsi kunye nenkonzo ebanzi emva kokuthengisa, kwaye uyayiqonda imeko yethu yokuphumelela!